Yenza i-DNA Model ongayidla
Kukho izinto ezininzi eziqhelekileyo ongazisebenzisayo ukwenza ifom ye-DNA ye-helix. Kulula ukwenza imodeli ye- DNA ngaphandle kwe-candy. Nantsi indlela i-molecule ye-DNA ekwakheka ngayo. Xa usugqibile iprojekthi yesayensi, ungadla imodeli yakho njengentlanzi.
Ukuze ukwakhiwe umzekelo we-DNA, kufuneka ukwazi oko kubonakala ngathi. I-DNA okanye i-deoxyribonucleic acid i-molecule eyenziwe njenge-ladder ephosakeleyo okanye i-helix kabini.
Amacala omanqanaba yi-DNA backbone, eyenziwe ngamaqela aphindaphindiweyo eshukela (deoxyribose) ehlangene neqela le-phosphate. Imigangatho yeli nqanaba iisiseko okanye i- nucleotides adenine, i-thymine, i-cytosine kunye ne-guanine. I-ladder iphikisiwe kancane ukwenza i-helix ifom.
I-Candy DNA Model Materials
Unokhetho oluninzi apha. Ngokwenene, udinga imibala engama-1-2 ye-candy-like candy ye-backbone. I-Licorice ilungile, kodwa unokufumana i-gum okanye isiqhamo esithengiswa ngemichilo, nayo. Sebenzisa imibala e-3 eyahlukeneyo ye-candy e-soft for the bases. Ukhetho olufanelekileyo luquka i-marshmallows enemibala kunye nee-gumdrops. Qiniseka ukuba ukhetha i-candy onokuyiqhawula usebenzisa i-toothpick.
i-marshmallows encinci yembala okanye i-candy gummy (imibala e-4 eyahlukileyo)
Yakha i-DNA Molecule Model
Nika isiseko kumbala we-candy. Ufuna imbala emine yeefandi, eziya kuhambelana ne-adenine, thymine, guanine kunye ne-cytosine. Ukuba unemibala engaphezulu, ungadla.
Phakamisa iipipi. I-Adenine ibophezela kwi-thymine. I-Guanine ibopha kwi-cytosine. Iziseko zokubambisana nabanye! Ngokomzekelo, i-adenine ayizange ibophezele yona okanye i-guanine okanye i-cytosine. Xhuma ama-candies ngokusunduza ibini elidibeneyo elingaphakathi komnye phakathi kwe-toothpick.
Namathisela iiphelo eziqhotyoshelweyo zezinyathelo zokubamba i-licorice strands, ukwenza ifom yefowuni.
Ukuba uthanda, ungaphambukisa ilayisensi ukuba ubonise indlela i-ladder eyakha ngayo i-helix kabini. Gweba isiteji ngokukhawuleza ukuba wenze i-helix njengaleyo eyenzekayo kwizinto eziphilayo. I-helix candy iya kutyhila ngaphandle kokuba usebenzise i-toothpicks ukuba ubambe phezulu kunye nezantsi kwelaydi kwikhadibhodi okanye kwi-styrofoam.
I-DNA Model Options
Ukuba uthanda, unokunquma iziqhekeza ze-licorice ebomvu neyemnyama ukwenza umqolo ogqithiseleyo. Omnye umbala yiqela le-phosphate, ngelixa elinye liyi-sugar pentosis. Ukuba ukhetha ukusebenzisa le ndlela, nqamula i-licorice ibe ngamaqhosha amathathu kunye nemibala eminye kwintambo okanye umqhubi we-candy kufuneka i-hollow, ngoko ke i-licorice iyona khetho ekhethekileyo kulolu hlobo lwemodeli. iinxalenye zomqolo.
Kunceda ukwenza isitshixo ekuchazeni iinxalenye zomzekelo. Yenza udwebe uze ubhale itekisi kwiphepha okanye unamathele amacandi kwikhadibhodi uze uyibhawule.
Quick DNA Facts
I-DNA (deoxyribonucleic acid) kunye ne- RNA (ribonucleic acid) ziyi- nucleic acids , iqela elibalulekileyo lamamoleksi ephilayo.
I-DNA yiplani okanye ikhowudi yazo zonke iiprotheni ezibunjwe kwimizimba.
Ama-molecule e-DNA amatsha ayenziwa ngokuphula umgangatho we-DNA phantsi phakathi kwaye ugcwalise iziqhekeza ezingekhoyo ukwenza ama-molecule e-2. Le nqubo ibizwa ngokuba yi- transcription .
I-DNA yenza iiprotheni ngokusebenzisa inkqubo ebizwa ngokuba nguqulelo . Ekuguquleleni, ulwazi oluvela kwi-DNA lusetyenziswa ukwenza i-RNA, eya kwi-ribosomes yeseli ukwenza amino acid, ezidibeneyo ukuze zenze iipolpeptides kunye nama-protein.
Ukwenza imodeli ye-DNA akuyena kuphela iprojekthi yezesayensi onokuyenza usebenzisa i-candy. Sebenzisa izinto ezongezelelweyo ukuzama ezinye iimvavanyo !
Amanzi - Iwayini - Ubisi - Ubhiya Ubomi Ukubonakalisa
Indlela yokwenza i-Ink engabonakaliyo nge-Baking Soda
Iiprojekthi zeBakala zeNgcaciso zeBanga le-8
Iingcebiso ze-Trailering / Towing a Boat
Uluhlu lweZikolo zoLuntu ze-Free kwi-Free ye-Mississippi Students, K-12
I-Scientific Usetyenziso lweSayensi kunye neeDrama
I-Pros and Cons Cons of the Grass Tennis Courts
Ziziphi ii-Oslo Izivumelwano?
Kutheni iMozart engazange ifakwe kwi-Graper's grave
Iilwimi ezilandelwa ngu 'De' kwaye ezingapheliyo
Izaziso eziPhakamileyo zaseFransi - I-Adverbes Superlative
UHarry S. Truman